पूर्बि पहाडतिरको पहिलो पाईलो | नरेन्द्रजंग पिटर
पूर्बि पहाडतिरको पहिलो पाईलो
नियात्रा नरेन्द्रजंग पिटर May 7, 2009, 3:29 pm
राजनीतिक राप र चापले राजधानी तातेको थियो । सबै शक्ति र पक्ष्य आआफना दाउ खुलेरै खेल्दै थिए । कोही पनि पर्दामा थिएनन । त्यसै बेला इलाम जाने निम्तो आयो । एकातर्फ काठमाण्डौको सरगर्मी अर्कातर्फ जातिय आग्रहको बन्दको बिच यात्रा कति सुखद हुने हो ! भन्ने थियो भने अर्कोतर्फ पूर्बेली हरियाली बगैंचे जिल्लाले आकसर्ित गरिराखेको थियो मोह पनि त्यतिकै जागाईरहेको थियो ।
तराई बन्द थियो । जातिय उन्मादलाई ब्यबस्थापन गर्नै राजनीतिक नेतृत्वनै आग्रही भएपछि यो अबस्था हुनु स्वभाबिकै हुन्थ्यो । आर्दश र पहिचानका नाममा थालिएका उकासिएका र प्रायोजीत गरिएका सकि्रयताबाट पिडित तराई र यस्कॊ नागों वास्तबिकता र नेतृत्वका अन्तरआत्मा कुरा बुझदा पनि जसरी आम नेपाली प्रतिक्रया बिहिन छन म पनि एउटा लाचार ब्यक्तिभन्दा फरक थिइँन ।
सहभागी साथी अनुसार पनि यात्राका योजना बन्ने गर्छन । दोमनकै बिचमा थालियो । अरु साथीहरु अधिल्लै दिन त्यता लागिसकेका थिए । श्रि धर जी र मैले हबाई जहाज समयको अन्तिम क्षणतिर मात्रै तय गर्योँै । बिमानस्थलमा पत्रकार नेत्र केसी भेटिए । कर्म थलो र मेरो बिष्व बिध्यालय नेपालगन्जबारे कुराकानी भए । नेत्र नेपालको ब्यबसायिक पत्रकारितामा मह्त्वपूर्ण नाम हो । कास .....उ पनि यही माहैलमा फस्दो हो त आग्रह रहित पत्रकारिता गर्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो होला सोच्दछु ।
यात्रा कति सुखद हने हो ३० मिनटको उडानपूर्बिय हिम श्रिखलांको स्वाद लिदै तातो तातो र गर्मिकॊ बिचको बिराट नगर उत्रिँयौ ।
राजधानीमा राजनीति को चर्काै सरगर्मी छ । बिराट नगर गर्मीले पाकिरहेको छ । o!… बिराट नगर ४वटा प्रध्1नमन्त्री जन्माईसकेको सहर । त.....आधुनिक नेपाली इतिहासको प्रमुख थलो बनेको छस । मजदुर आन्दोलन, सशस्त्र सर्घषमा बिदेशी मित्रहरु फणेसवर रेणुको सहभागिता र डा. कुलदिप झाको कुसाघाट मोर्चामै शहादत र चक्रवतिबन्धुहरुको बम बनाउदैको शहादत । सघर्षमा अन्तराष्टय ऐक्यबद्धताको अनुपम मिसाल । उद्योगब्यबसायको केन्द्र । राष्टको मुल धमनी । यहीँ मुक्ति सेनाले आफनो पौेरख देखाएर राणाहरुको हेकडी छोडाइदिएको फत्ते बहादुर नेपालीले पहिलो तोप र टयाङ्कंर बनाए । प्रयोगको थलो । यही बिमान स्थल नेपालकै एकमात्रै बिमान अपहरण राजनैतिक उदेस्यले भएको । सलाम …।नायक दुर्गा सुबेदी । बिचार प्रतिको प्रतिबद्धताआग्रहहिन आर्दशको लागी ।
हाम्रो टिममा अरु २ जना साथीहरु पनि थपिनु भयो । बन्दबाट छलिदै रङ्गेली हुलाकी बाटो हुदै पुर्ब हुइकियौ । खिम कोईरालालााई पूर्बबारे राम्रो अनुभब छ । यसभन्दा पहिले पनि म उिनंसगं यात्रा गरिसकेको छु । सुखानीका जगंल र प्रकास समशेरको हबेली अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय बनेको छ घुमेको छु । अनुभबी ड्राइभर हुन उनि । उर्लाबारीबाट पूर्बतिर हाकिदैजादाँ जताततै तुजुगमय ठडिएका चिहान र निर्दललाई जिताउन महाँपन्च शुबथाले फडानी गरेको जगंलले बिगत र वर्तमान सोच्न बाध्य बनायो । हामी नेपाली जनलाई छिटट्ै बिर्षने रोग लागेको छ । हालसालैको राजनैतिक सरगर्मीपनि त त्यसैको उदाहरण हो ।
हामी चार आलीबाट उकालो लाग्योै । शब्दको अर्थ पनि ठाँउ अनुसारका । आफु त किसानपुत्र । चारआलीलाई ४ गह्राको डिल भन्या त चौेबाटो पो रहेछ । कतैत अर्थको अनर्थ लागेर दुख पनि पाइन्छ । पस्चिमको याद आयो । जुम्लामा टाउको र बैतडीमा कडी अपशब्द हुन्छन भने खाटीँ प्यूठाने चिनिँन अन्यन्त्र अपशब्द मानिने गाँ…। थेगो नै बनेको हुन्छ । हाट बजार लाग्ने दिनले ठाँउका नामहरु जुरेका छन । आईतबार देखी शनिस्चरे सम्म । एउटै जिल्लामा कति हो कति कहिल्यै खेता गह्रा खाली नहुने झापाको बुधबारे तिन तले खेती सुपारीको बोटमा मरिचको लहरा मझेरी लिप्या झै भूइँ जमिन मुनी बेसार खेती र चारबाली लाग्ने ठाँउ । साच्चैनै पोैरखी हातहरुले खेतलाई काबु पारेर रत्याएर आफुलाई सम्पन्न बनाएका छन । झापा बिद्रोहको शखंनाद भएको थलो अहिले कृषिको आधुनिककरणको नमुना ।
आफु इलाम लागेको बिद्युतिय चौतारीमा के टाग्याथिएँ तुरुन्तै बेल्जियमबासी धराने कबि कृष्ण बजगाईले सुझाब दिए … इलाम र ६ अ [अदुवा, ओलान- दुधका परिकार,अमि्रसो,आलु .अलैंची र अर्थाडक्स चिया ] नछुटाउनुस भनेर ।
जिल्ला प्रबेस गर्नै थाल्दा हरियाली प्राकि्रतिक बगैचा झम्के साझँको पछयोरी ओडदै थियो । त्यहाँको मसिनो जानकारी राख्ने मोहन हामीलाई शब्दमा चिनाउदै थिए । फिक्कल पुग्दा त साझःँ रातमा फेरिने तरखर गरिसकेको थियो । निम्तारुलाई खबर भैसकेको हुदाँ गास र बासको चिन्ता थिएन । नागबेली सडक छिचोल्ोर फिक्कल दोबाटोमा पुग्दा नपुग्दै अघिल्ला दिननै आएका साथीहरुले फोन सम्पर्ग गरे । त्यो टिम भारतको दार्जलिग र सिक्कमबाट माने भन्ज्याग हुदै फर्केको थियो । दलमा ८०बर्षे यूवा नारायन सर्मा अद्यक्ष प्रेश काउिन्सल, सुरेश आर्चाय अध्यक्ष न्यूनतम पारिश्रमिक आयोग ,गोबिन्द आर्चाय उप सभापति नेपाल पत्रकार महासघ, किशोर श्रेष्ट सदस्य प्रेस काउिन्सल तथा सापताहिक जन आस्थाका संपादक थिए ।
यातायात सुबिधाले झण्डै ५ घण्टामा हामी काठमाण्डौँबाट इलाम बजारमा पुग्योैँ । सन्चार सुबिधाले देश देशान्तरसगं जिवन्त सम्पर्क हुदै थियो । राजधानीको हरेक पलपलका खबरबाट अपडेट हुईदै गईयो । थाकेको सरिर बिस्तारामा थन्क्याउदै सोच्न थाँली अहो..... इलाम त इलामनै पो रहेछ ! साथहिरुसगं परिचय त पुरानै हो तर घुलमेल हुन पाएको भने थिएन । बर्षाै पुरानो परिचय भन्दापनि छोटो सहयात्राले एक अर्कालाई चिन्न र बुझन अझ मददत गर्छ र हादिर्कता बढछ । सोच्दासोचदै लुटुक्क निदाईएछ ।
बिहानै होटलको छतबाट नियाल्दा -क्या सुन्दर जिल्ला ! एकाबिहानेै रबिकिरणसगै डाडाकाडमा फैलिएको इलामले आफनो मौलिक परिचय दिदैं मुग्ध पार्छ । कोरीबाटी गरेका हरियाली डाडाँ आफनै बसन्तिलो बैसमा मात्तिएझै लाग्छन । जगंल हेाकी खेती छुटयाउनै सकिदैन । बाझोँ कहीँ छैन परमपरागत खेती बिरलै देख्न पाईन्छ ।
पस्चिमेली उराठलाग्दा डाडाँ काढाँ चाहारेको मान्छे ,अलग्गै धरतीमा आएको पो की भान हुन्छ । मन्द मन्द हावा, कोलाहाल बिहिन परिबेश । माहौल पनि बसन्तिलो तर काठमाण्डुको तातो राजनिितक माहौलका चतुर तिन खेलाडी एसै वडाका राज प्रतिनिधी । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सबिधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्बागं र नेपाली काग्रेसका महामन्त्री के बि गरुगको घर यसै वडामा पर्दछ । कान्ला मुन्तिर बसपार्क छ । त्यहीँ पुबृे्रली चम्किलो रातो तारा शहीद रत्न बान्तवाको सालिक छ । जातिय आन्दोलनको भटिटमा आफना रोटी सेकाउने हुन या बिबर्गिय साठँगाठमा आफना आग्रह पुष्टि गर्नेलाई यो नाम र उन्को काम भिल्लका देशमा कौडी बराबर हुनसक्छ ।
छतले मन मानेन घुम्न निक्लिएँ । दार्जलिग भन्दापनि अनुपम सुन्दर । कास यहाँ पुर्बाधार र यथोचित प्रचार भएमा यो पर्यटकहरुको गन्तब्य थलो बन्नसक्छ । फुलेका कटटुसले बासनामात्रै हैेन त्यस बासनामा कामुकतापनि छरिराखेको छ भने काडाँका बिचमा लटरम्म ऐँसेलुले जगंलनै बगैचामा फेरेको छ ।
पत्रकार महासघको कार्यक्रम दिन भरी चल्यो । समग्र इलामको प्रतिनिधीत्व मात्र त्यस्ले गरेको थिएन । कोशी र मेचीका माईण्ड मेनेजरहरुको पनि त्यहाँ उपस्थीति थियो । इलाम घोषणपत्र जारी गदै समापन भयो ।
उपरोक्त हरफहरु सेनापति बिबादको पटाक्षप हुनु भन्दा पहिलाका हुन । अहिले राष्टिय रगंमन्चमा सबैका लिगं छुटिटए । कित्ताबन्दी भयो । कोही पर्दामा रहन सकेन पाएन । आग्रहले धारणा बनाउनेहरुको हबिगत देखियो । सम्मानित राष्टपति महोदय सबेैधानिक मर्यादामै हुनुहुन्थयो भने राजनतिक शक्तिहरुको अराजनितिक पस्चगामी र बिदेसी दबाब र प्रभाब यति ज्यादा होला भन्ने नेपाली जनले कल्पना समेत गर्न पाउने थिएनन । पहिला त्यस्तो भद्धा चरित्र देखिसकेको पनि थिएन । नागरिक सर्बाेच्चताको बिषयल यति ठुलो प्रताडित भैसक्नु परेको थिएन । । आग्रह र स्र्वाथले बिषयबस्तु हेरिन्छ बुझिन्छ र ब्यबहार गरिन्छ भने इतिहास कसरी घायल हुदोरहेछ प्रतक्ष यो लोकले बुझन पाईसकेको थिएन । तर त्यस्को पूर्बाभास भने इलाम यात्रापूर्बनै भैसकेको थियो
(यस लेखको सपादित अशं बैसाख २३को जन आश्था साप्ताहिकमा प्रकासित )